घूस प्रकरणमा न्यायाधीश कोइरालालाई काम गर्न रोक
‘अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी नहुने पत्र पठाइसक्यौं’
विज्ञ भन्छन्- दिसामा पाइने जीवाणु खानेपानीमा मिसिंदा काठमाडौंमा हैजा फैलियो
भारतीय चर्चित गायक केकेको निधन
भारतको कोलकातामा गीत गाउँदागाउँदै असहज महसूस गरेका चर्चित गायक केकेको निधन भएको छ।
‘सङ्गीतकी सरस्वती’ को अवसान
प्रत्यक्ष लतालाई नभेटे पनि सङ्गीतकी सरस्वती मानेर तस्वीरमा पूजा गर्थ्यौं, तर अब त झन् तस्वीरमै पूजा गर्नुपर्ने भयो।
लताले ‘बाँचुन्जेलीलाई’ गाउँदा भनेकी थिइन्- धेरै वर्षपछि नेपाली गीत गाउँदा खुशी लागेको छ
प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरले १० वर्षअघि नेपाली गीत गाउँदा खुशी लागेको बताएकी थिइन्।
यस्ता छन् लता मंगेशकरले गाएका नेपाली गीत
प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको निधन प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको ९२ वर्षको उमेरमा निधन भएको छ।
सबैले बिर्सिएका नेपाली संगीतका एक 'त्रिमूर्ति' अम्बर गुरुङ शुरूदेखि अनि गोपाल योञ्जन र जितेन्द्र बर्देवा चाहिँ पछि गएर बहुमुखी नेपाली सङ्गीत स्रष्टा बने। आफूले रोजेको बाजा बजाउन शुरू गरे, गीत गाउन थाले, मेलोडी रच्न थाले, आफ्ना सबै सङ्गीत संयोजन गरे र सार्वजनिक मञ्चमा प्रस्तुति दिए।
‘योञ्जन परिवारमा अम्बर गुरुङप्रति चरम घृणाभाव र पिटर जे. कार्थकप्रति द्वेषभाव देखियो’ उहाँहरूको टिप्पणीबाट एउटा कुरा प्रष्टसित प्रकट भएको छ: त्यो हो अम्बर गुरूङप्रति योञ्जन परिवारको चरम घृणाभाव र मेरो बुवा कार्थकप्रतिको द्वेषभाव, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो भन्छु। नत्र ‘तिललाई पहाड’ बनाएर दिवङ्गत व्यक्ति उपर यस्तो विवादास्पद विचार पोख्ने अशोभनीय काम उहाँहरूबाट हुने थिएन।
उर्दू गजलको काठमाडौं सफर! हामीसँगको पहिलो भेटमा कौशरले एउटा एउटा पाना झिकेर त्यसमा लेखिएका गजल सुनाएका थिए। “लेख्यो, सुनायो, पछि हराउँछ, फेरि नयाँ लेख्यो,” उनले भनेका थिए। त्यसपछि हस्तले नेपालगञ्जका स्टेशनरी पसलमा पाइने सबैभन्दा राम्रो र ठूलो नोट बुक किनेर कौशरलाई दिएका थिए, अबदेखि आफ्ना शायरी यसैमा लेख्नु भनेर। त्यही नोट बुक पल्टाएर अर्काे शायरी गाए कौशरले।
गोपाल योञ्जनबारे पिटर जे कार्थकले छरेका भ्रम र तथ्य गोपाल योञ्जन सम्बन्धी लेखमा पिटर जे. कार्थकले बारम्बार अम्बर गुरूङको चर्चा छिराएका छन्। योञ्जनलाई एक ठाउँ 'ऊ आफैं एउटा इन्स्टिच्यूसन बनिसकेको' भन्ने वाक्यमा समेत गुरूङको नाम घुसाएका छन्। यसबाट ‘अम्बर गुरुङलाई जबर्जस्ती भए पनि गोपाल योञ्जनको गुरु बनाउने उनको आफ्नो एकल अभिप्राय देखिन्छ। यस्तो इतिहास पढ्नेले भोलिका दिनमा कस्तो धारणा बनाउँलान्?
कोरोना संक्रमित वरिष्ठ गायक श्रेष्ठ खतरामुक्त, सरकारको बेवास्ता! देशकै निधी यी वरिष्ठ गायक सिकिस्त भइरहँदा पनि सरकार र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानले कुनै चासो नदेखाएको श्रेष्ठका एक सहकर्मीको गुनासो छ।
गोपाल योञ्जनः एक ‘सङ्गीत सन्न्यासी’ त्यस रात हाम्रो छुट्टी थियो। हामी रक्सी पिउँदै, गीत सुन्दै बसिरहेका थियौँ। नजाने कहाँबाट हाम्रो कोठामा गोपाल योञ्जन फुत्त झुल्कियो। सम्भवतः त्यस साँझ उसले रिञ्छेनसँग भेटेर आएको हुनुपर्छ। दुईबीच प्रेमको पालुवा पलाएको सुइँको हामीले पाइसकेका थियौं।
‘राज्यले गोपाल योञ्जन र प्रेमध्वज प्रधानलाई त्यसरी सम्मान गर्नैसकेन जसरी नारायणगोपाल र अम्बर गुरुङलाई गर्‍यो’ गोपाल योञ्जन प्रहरी सेवामा पनि जागीर गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ कार्यक्रम गर्दा हामीलाई ‘प्रेमध्वजलाई लिएर आओ’ भन्नुहुन्थ्यो। मेरो त मोटरसाइकल पनि थिएन। अरूले नै ल्याउँथे। उहाँका कार्यक्रममा कति पटक मैले पनि कोरस गाएको छु। पछिपछि भने एक–दुई पटक गाउने मौका पनि पाएँ।
यी हुन् हाम्रा डम्बरबहादुर (लुइ ब्याङ्क्स), जसलाई ‘गडफादर अफ इन्डियन जाँज’ भनिन्छ ! तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको अनेकतामा एकताको राष्ट्रिय सन्देशको परिकल्पना ‘लाइट अफ फ्रीडम’ र ‘मिले सुर मेरा तुम्हारा’ ले लुइलाई राष्ट्रिय व्यक्तित्वका रूपमा स्थापित गर्दछ। यतिबेलासम्म उनले ‘गडफादर अफ इन्डियन जाँज’ का रूपमा ख्याति बनाइसकेका हुन्छन्।
केन्जिङ कति दूर ? हर्षदीपले एउटा हिमाचली लोकगीत पनि गाएकी रहिछन्- 'माय नि मेरिए सिम्ले दि राहे चम्बा कितनि क दूर' बोलको। यही क्रममा थाहा पाएँ, यो गीत मोहित चौहान लगायतका भारतका धेरै उम्दा गायकले पनि गाइसकेका रहेछन्। लोकगायक शरण दासले यसलाई मौलिक स्वरूपमा मौलिक बाजाका साथ गाएका रहेछन्। हिमाचलका पुस्तौं पुस्ताका लोकसर्जकले यो गीतको शब्दलाई मिहिन तरिकाले कुँदेका रहेछन्, मीठो भाकामा ढालेका रहेछन्।
काठमाडौंले नसुनेरै बिदा भए राम धामी सुनसरीको इटहरीमा बसेर संगीत कर्म गर्दै आएका राम धामीको ५७ वर्षको उमेरमा आइतबार निधन भएको छ।
काठमाडौंको खाल्डो या दार्जीलिङको पहाड, कहाँबाट शुरु भयो त आधुनिक नेपाली सङ्गीत ?
के के आधुनिक वाद्ययन्त्र, गीत र गायन भएपछि आधुनिक नेपाली सङ्गीत हुन्छ ? आज पनि यो अनुत्तरित प्रश्न हो। किनकि अगुवा कलाकारका प्रचलित गीत–गायनमा पनि आधुनिक बाजा पियानो, क्लारिनेट, तबला, गितार आदि प्रयुक्त छन्।
नाल्मा गाउँको बेग्लै रामायण
लमजुङ, नाल्मा गाउँका आइतमान बिकले गाएर सुनाएको रामायणको कथाका कतिपय पात्र र चरित्र वाल्मीकि रामायणसँग पटक्कै मेल खाँदैनन्। वानर सेना, मन्थराको उपस्थिती नभएको बरु शिवजी भेटिएको रामायणको रचना किन र कसरी सम्भव भयो त?
महान् मोचार्ट, जसको शव बाटैमा छाडेर मलामी फर्के
अंग्रेजी मितिका हिसाबले नारायणगोपालको निधन डिसेम्बर ५, १९९० मा भएको थियो । संयोग, यही दिन डिसेम्बर ५, १७९१ मा अस्ट्रियाका महान् संगीतज्ञ मोचार्टको देहान्त भएको थियो । तर, त्योभन्दा पनि महासंयोग त यिनै नारायणगोपालले यूरोपका दुई शताब्दी पुराना प्रतिभालाई सम्झेर लेख नै लेखेका रहेछन् । नारायणगोपालको दुर्लभमध्येको एक लेख ।
केही मीठो बात...होइन ‘बाट’ गर ! 'केही मीठो बात गर' को यो फरक ‘भर्सन’ सुन्नेलाई नारायणगोपालले नै गाएको हो भन्दा पत्यार लाग्दैन ।
एक ‘अरोगेन्ट’ महान गायक ! नारायणगोपाललाई 'अरोगेन्ट' भन्नेहरुका लागि पनि उनी निसन्देह रूपमा एक महान् गायक थिए।
‘मच्छिन्द्रबहालमा भजन गाउने हिम्मत कसरी गर्‍यो नारायणगोपालले ?’ नारायणगोपाल (गुरुवाचार्य) लाई सबैले चिन्दछन्। सुनहरि चाहिं मेरा दिवङ्गत ससुरा हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौंको पुरानो ठाउँ भेडासिंको जनबहाल वा मच्छिन्द्रबहालको हुनुहुन्थ्यो सुन्दरहरि प्रजापति। साथीहरूले उहाँको नाम छोट्टयाएर सुनहरि राखिदिए। मैले उहाँकी छोरी रञ्जनारानी प्रजापतिलाई बिहे गरेपछि म सुनहरिको ज्वाइँ हुन पुगेँ।
अष्ट्रेलियाबाट निर्जन रिजालको र्‍याप 'अर्थ' सार्वजनिक अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवा निर्जन रिजालको समूहले र्‍याप विधाको गीत 'अर्थ' को म्यूजिक सार्वजनिक गरेको छ। निर्जनले गीतमा अहिले युवा पुस्ताले गुजारीरहनु परेको समय र उनीहरूको सोचलाई प्रतिबिम्बित गरेका छन्।
उच्च अदालत पाटनले दियो र्‍याप गायक भिटेनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश उच्च अदालत पाटनले र्‍याप गायक भिटेनलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। फौजदारी कसुरमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्न पक्राउ गर्न सक्ने भएपनि गीतसंगीतको विषयमा भिटेन (समीर घिसिङ)लाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको ठहर अदालतले गरेको छ।
र्‍यापर भिटेनलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले दियो साइबर ब्यूरोलाई निर्देशन र्‍यापर भिटेन उपनामले चर्चित समीर घिसिङलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई निर्देशन दिएको छ। एक साताअघि युट्युबमा भिटेनको ‘पारा’ शीर्षकमा सार्वजनिक भएको र्‍याप भिडिओमा आपत्तिजनक शब्द प्रयोग भएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यलयले कारबाही गर्न साइबर ब्यूरोलाई पत्र लेखेको हो।
कलानिधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालयकी संरक्षक वरिष्ठ शास्त्रीय संगीतकर्मी इन्दिरा श्रेष्ठको निधन नेपालीको शास्त्रीय संगीत क्षेत्रको उत्थानमा लामो समयदेखि अतुलनीय योगदान पुर्‍याउँदै आएकी कलानिधि इन्दिरा संगीत महाविद्यालयकी संरक्षक एंव अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठको मंगलवार बिहान निधन भएको छ।
मणि काङमाङ राईको ‘हारीसके’ म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक गायक मणि काङमाङ राईको ‘हारीसके’ बोलको गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। धरानमा बसेर सांगीतिक क्षेत्रमा सकृय गायक राईको यो १२ औं म्युजिक भिडिओ हो।
चोट सिउनु कि मन सिउनु यसपालि ! कामविशेषले २९ फागुनमा आफू हुर्केबढेको शहर धरान पुगेका वरिष्ठ गायक दीप श्रेष्ठ पाँच महीना उतै थुनिए। फर्केर हेर्दा, उनले बिताएका पाँच महीना काठमाडौंले आफ्नो बनाएपछिको सबैभन्दा लामो धरान बसाइ रहेछ।
चर्चित भारतीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको कोरोना संक्रमणबाट निधन चर्चित भारतीय गायक एसपी बालासुब्रमण्यमको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको छ। चेन्नईको एक अस्पतालमा उपचारको क्रममा गायक बालासुब्रमण्यम निधन भएका हो।
ब्रबिम शेर्मा र सीता सिंघकको ‘ज्यानै हाजिर भो’ सार्वजनिक ब्रबिम शेर्मा र सीता सिंघकको ‘ज्यानै हाजिर भो’ गीतको म्युजिक भिडिओ सार्वजनिक भएको छ। लिम्बु भाषाको गीतमा स्थापित गायक शेर्मा र गायिका सिंघकले मुलधारको गायनमा पनि दर्शक तथा स्रोताको माया उत्तिकै पाउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।
देखेको अर्कै, लेखेको ‘गायक’ नेपाल आइडलमा सज्जा चौलागाईं (२३) को सफलता एउटा यस्तो आम–कथा हो, जसमा संगीतको अर्थ सोखसँग भन्दा भोकसँग जोडिएको छ।